Chakra Archimedes (2012-02-12) ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ KDE 4.8 သည်တည်ငြိမ်သည့်သိုလှောင်နေရာ (Core) သို့ပြောင်းသွားသည် Linux မှ
Chakra Archimedes (2012-02-12) ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ KDE 4.8 သည်တည်ငြိမ်သည့်သိုလှောင်ရုံ (Core) သို့ရွေ့သွားသည်။
Perseus | | ဖြန့်ဝေ, GNU / Linux များ, NOTICIAS
ဒီလူတွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရွေ့လျားနေတယ်၊ ​​လွန်ခဲ့တဲ့နာရီအနည်းငယ်ကမှပဲဗားရှင်းအသစ်ထုတ်လွှင့်ခြင်းကိုတရားဝင်ကြေငြာလိုက်တယ် Archimedes အခြားအရာများအကြားကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းသော:
Linux kernel 3.2.2 (2.6.35.14 optional)
လုံခြုံရေးရွေးချယ်စရာများအတွက် tomoyo-tools 2.5 ကိုပုံမှန်တပ်ဆင်ခြင်းတွင်ထည့်ခဲ့သည်
wqy-microhei သည်တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယားဘာသာစကားများအတွက်ပုံမှန် font အသစ်ဖြစ်လာသည်
အသစ်အနုပညာလက်ရာများ Ronak ၏နိဒါန်း (တကယ်ကြီးသော !!!;))
ISO ကို DVD နှင့် CD ဗားရှင်းများတွင် download လုပ်နိုင်သည်။ CD ဗားရှင်းသည်သင်အား text editor, file manager, web browser နှင့် multimedia player တို့ပါဝင်သည့်အခြေခံနှင့်အနည်းဆုံး KDE desktop ကို install လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ နောက်ထပ်အပလီကေးရှင်းများမရှိပါ၊ ဘာသာစကားအစီအစဉ်မရှိပါ။ DVD ဗားရှင်းတွင်ဘာသာစကားမျိုးစုံ၊ အများဆုံး KDE application များ၊ LibreOffice 3.4.5, Amarok, kde-telepathy, SpiderOak, ပရင်တာအထောက်အပံ့၊ Minitube, k3b တို့ပါဝင်သည်။
မှတ်စု: Chakra ISO ဖိုင်များနှင့်မကိုက်ညီပါ Unetbootinနှင့် CD / DVD များကို 4x ထက်မပိုသောအမြန်နှုန်းဖြင့်မီးရှို့ရန်လိုအပ်သည်။
download link ISO ရဲ့.
KDE 4.8 သည်တည်ငြိမ်သည့်သိုလှောင်ရုံ (Core) သို့ရွေ့သွားသည်။
သုံးလနီးပါးစမ်းသပ်ပြီးနောက် KDE3ကိုတည်ငြိမ်သော repository (Core) တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ အထူးသဖြင့်အထူးသဖြင့်ဤအခါသမယတွင်အကြံပြုသည် Appset ကိုအသုံးမပြုပါနှင့် ဒီ update အတွက် + အောက်ပါအကြံပြုချက်များအတွက် -
အဆင့်မြှင့်တင်မှုအောင်မြင်ပြီးသည်နှင့် system ကို reboot လုပ်ပါ။
KDE 4.8 ကိုသက်ဆိုင်ရာကွန်ပျူတာများတွင်အသုံးပြုရန်အတွက် Mirror အားလုံးကို Update လုပ်ရန်ယခုအချိန်တွင်သာကျန်တော့သည်။ D.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » Chakra Archimedes (2012-02-12) ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ KDE 4.8 သည်တည်ငြိမ်သည့်သိုလှောင်ရုံ (Core) သို့ရွေ့သွားသည်။
22 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
ငါလက်ရှိ Kubuntu ကိုသုံးနေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်သူဘယ်လမ်းကိုသွားမယ်ဆိုတာမသိသေးဘူး၊ ငါ Chakra ကိုသုံးမယ်ဒါပေမယ့် virtual PC မှာထိန်းချုပ်ဖို့ထိန်းချုပ်လိမ့်မယ်
ကျိန်းသေ kde နှင့်အတူအကောင်းဆုံး distros များထဲမှတစ်ခု, သူတို့သည်လည်း canonical နှင့်ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး dvd ပါဝင်သော software များအတွက်စစ်တမ်းတစ်ခုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
Man, Canoni $ မကြာခဏပြောတာက "ဒါကဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူး"
ဒီလူတွေဟာ Sisas တွေတော်တော်များများအလုပ်လုပ်ကြပြီး Akabei ကဒီနှစ်မှာဒီနှစ်စတင်မယ်၊ Chakra Linux ကို 2012.02 က usb ကနေ install လုပ်နိုင်လျှင် "LinuxLive USB ဖန်တီးသူ" နှင့်အတူဖြစ်နိုင်သည် ဖယ်ထုတ်ခြင်း သင်ကြိုးစားမကြည့်ရင်တောင်ဘာမှမလုပ်နိူင်တော့ပါ။ သူတို့သည် Qupzilla ကိုမည်သို့ဝတ်ဆင်ကြသည်ကိုကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သည်။ သူတို့သည်သူတို့၏အသွင်အပြင်ကိုအနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုပြုခဲ့ကြပြီးယခုတွင်မူအနည်းငယ်မျှသာတွေ့မြင်ရသည်။
ယောက်ျားများသည်ဤ distro ကိုသင်ကြော်ငြာသောသင်လုပ်သောအလုပ်နှင့်၎င်းသည်မည်မျှအရည်အတွက်အလွန်အမင်းလျှော့တွက်နေသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
ပိုမိုလွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ရန်အတွက်ပါဝင်သော Codecs များပါ ၀ င်ပါသလား။
ကုဒ်နံပါတ်များကို terminal line တစ်ခုဖြင့်ထည့်သွင်းထားသည်သို့မဟုတ်သင်၎င်းတို့ကိုယူဆောင်လာသည့် VLC ကိုသင်တပ်ဆင်သည်
ဟုတ်တယ်၊ သူငယ်ချင်း၊ စက်ရုံမှာတပ်ထားပြီးသား။ သင်ကြိုးစားကြည့်လျှင်သင်နောင်တမရပါ will
ငါ Chakra ကို KDE 4.8 အထိအဆင့်မြှင့်လိုက်ရုံနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်၊ အမြန်နှုန်းနှင့်အပြုအမူကွဲပြားခြားနားမှုများသည်အလွန်ထင်ရှားသည်။ ငါတကယ်လင်းပိုင်ရဲ့အပြုအမူကြိုက်တယ်။ ကောင်းပြီ, ငါ Chakra ပိုမိုမြန်ဆန်စွာစတင်ကျင်းပတဲ့ခံစားချက်ရှိသည်။
ဟုတ်ကဲ့, KDE 4.7.4 နှင့် KDE 4.8 အကြားခြားနားချက်သည်ထူးခြားသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်ကွာခြားချက်သည်အလွန်ဆိုးဝါးသည်။
+1 ... ငါအံ့သြမိတယ်၊ စွမ်းဆောင်ရည်တွေအများကြီးတိုးတက်လာတယ်ဆိုတာကို av လာavကအသိအမှတ်ပြုတယ်
ငါဒုတိယထပ်လိုက်ရင် ၁gb ရှိတဲ့ Atom netbook ပေါ်မှာကျွန်တော်သုံးတဲ့သူကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အရမ်းသဘောကျမိတယ်။ ဖြစ်ရပ်ဆန်း။
တကယ်လား ငါကြိုးစားခဲ့သောပထမ ဦး ဆုံး desktop environment များထဲမှတစ်ခုမှာ KDE ဖြစ်ပြီး Fedora 16 နှင့်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကကျွန်ုပ်နှစ်သက်ခဲ့သည်။ သို့သော်မည်သည့်ညှိနှိုင်းမှုမှမရှိ၊ မည်သည့်အရာမျှမဖြစ်နိူင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် netg netbook 2gb နှင့် 1.86Ghz တွင်ရှိသည်။ ကောင်းပြီ, ငါကကြိုးစားရန်ဝံ့ပါလိမ့်မယ်!
ငါတကယ် kernel version အတွက်စမ်းသပ်ချင်တယ်။ အဆင်မပြေမှုက၎င်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် torrent တစ်ခုတည်းမရှိခြင်းဖြစ်သည်။
အကယ်၍ torrrents များရရှိနိုင်လျှင်: http://www.chakra-linux.org/get/
အဲဒီမှာသင်လိုချင်တဲ့ version၊ DVD (Full) ဒါမှမဟုတ် CD (Minimal) ကိုရွေးပါ။
ahhh ငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်သဘောပေါက်ဘူး နောက်ဆုံးတော့ xD ဖြစ်ခဲ့တာ
မင်္ဂလာပါ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤ OS ကိုထည့်သွင်းရန်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားပါသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၌ပြaနာတစ်ခုရှိသည်၊ ကျွန်ုပ် nolapic ကိုပိတ်ထားရမည်။
ကျေးဇူးပြုပြီးဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာငါ့ကိုသင်ပေးလို့ရမလားကောင်းပြီ၊ ဖြည်းဖြည်းချင်း၊ ငါမရှုံးရင်ငါပျောက်သွားတယ် ... hehe
အကြံပြုချက်တစ်ခု၊ သင့်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောအကူအညီပေးနိုင်ရန်ဖိုရမ်တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအကူအညီများပေးရန်နှင့်သင်ကိုယ်တိုင်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာဖော်ပြရန်အတွက် -
မင်္ဂလာပါ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ ကျွန်ုပ်သည် Dell Latitude D510 တွင် Chakra ကိုတပ်ဆင်ခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်မှာပြproblemနာတစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏ wireles card ဒရိုင်ဘာကို install လုပ်သည့်အခါ၎င်းသည် ipw2200 ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ၎င်းသည် firmware ကိုအသိအမှတ်ပြုသည့် module ကိုပြန်ဖွင့်သောအခါ၎င်းကိုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ငါ့ကွန်ပျူတာ၊ တစ်ယောက်ယောက်ကဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာသိရင်ငါသဘောကျမှာပဲ။
မည်သည့် command ဖြင့်ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ရမည်နည်း။
ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ကဒီ command ကို /etc/rc.local... ထဲမှာသွင်းလိုက်ရင်အဲ့ဒါပဲ၊ ငါလက်တော့ပ်ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာသူကအလိုအလျောက် load လုပ်လိမ့်မယ်🙂
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ - Post-Install Chakra Linux